LAYAAB: Koobka qarammada qaaradda Afrika oo lagu xaday dalka Masar – Gool FM
(Africa) 06 Seb 2020. Waa dhacdo yaab leh oo ay aad uga caroodeen shacabka reer Masar markii ay maqleen war sheegayay in mid ka mid ah koobabkii ugu qiimaha badnaa ee uu horey ugu guuleystay xulka kubadda cagta dalkaasi laga xaday xarunta xiriirka kubadda cagta Masar (EFA) ee magaallada Qaahira.
Koobkan la xaday ayaa ah mid ka mid ah 3-dii Koob ee Qarammada Africa (The African Cup of Nations) oo xulka Masaaridu ay ku guuleysteen sanadihii is xig xigay ee 2006, 2008 iyo 2010.
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee xiriirka kubadda cagta Masar, Axmed Shuuber, ahna Joornaaliiste dhanka ciyaaraha ka faallooda ayaa xaqiijiyay in Koobkaasi uu maqan yahay, isla markaana laga waayay dhismaha xiriirka kubadda cagta Masar.
Arrintan ayaa lagu baraarugay kaddib markii dhowaan xiriirka kubadda cagta Masaaridu ay aas aaseen mutxaf gaar ah oo lagu keydinayo abaalmarinnadii iyo Koobabkii uu xulka qaranka Masaaridu ku guuleystay, iyadoo dhismaha mutxafkan lagu soo aaddiyay 100 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aas aasay xiriirka kubadda cagta Masaarida oo dhidibada loo taagay 3 December 1921-kii.
“Markii la is yiri Koobabkii xulka Masar ku guuleystay u rara dhismaha mutxafka cusub ayaa waxaa lagu baraarugay in Koobkii Africa uu ka maqan yahay qasanadda xiriirka kubadda cagta” ayuu yiri Axmed Shuuber oo intaa ku daray in qaar ka mid ah shaqaalihii dhismaha xiriirka ay sheegeen in Koobkaasi uu ku dambeeyay gacanta Kabtankii hore ee Masar Axmed Xasan oo uu isagu qaatay, hase yeeshee markii laacibkaasi la weydiiyay ayuu arrintaasi beeniyay.
Taageerayaasha kubadda cagta Masaarida iyo guud ahaan dadka isticmaala baraha bulshada ee dhanka Internet-ka dalkaasi ayaa aad uga carooday ceebtan meesha taalla iyagoo ku baaqay in lala xisaabtamo xiriirka kubadda cagta Masar ee Egypt Football Association.
Sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in waxa maqan uusan hal Koob ahayne la la’yahay koobab kale oo qadiimi ahaa oo ku jiray keydka koobabka xulka Qaranka Masar.
Kabtankii hore ee Masar Axmed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay run tahay in Koobkii Qarammada Afrika ee xulka Masar uu ku guuleystay 2010 uu u qaatay gurigiisa maadaama uu ahaa hoggaamiyaha ciyaartoyda qaranka, si uu qoyskiisa iyo saaxiibadiisa ugula soo galo sawirro xusuus ah, kaddibna wuxuu sheegay in uu koobkii ku soo celiyay gacanta xiriirka kubadda cagta.
Dhanka kale xiriirka kubadda cagta Masar ayaa xusay in ay dhici karto in Koobabka maqan ay lumeen ama la xaday markii dab xooggan uu qabsaday dhismaha xiriirka sanadkii 2013-kii.
Si kasta oo ay tahayba ma jirto illaa iyo haatan cid garanaysa halka uu ku dambeeyo Koobka Qarammada Afrika ee laga waayay keydka koobabka Masar, waxaana dowladda Masaaridu ay ballan qaadday inay sameyn doonto baaritaan la xiriira sidii lagu soo heli lahaa Koobkaasi maqan.
Mbappé oo caddeeyay waxa ay u baahan tahay PSG si ay ugu guuleysato Champions League